स्वास्थ्य सेवा विभागका नयाँ महानिर्देशक डा. पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हाले – Nepali Health
स्वास्थ्य सेवा विभागका नयाँ महानिर्देशक डा. पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हाले
२०७६ भदौ ३१ गते १९:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, ३१ भदौ । स्वास्थ्य सेवा विभागका नयाँ महानिर्देशक डा रोशन पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आज निमित्त महानिर्देशक नियुक्त भएको पत्र पाए लगत्तै उनी टेकुस्थित विभाग पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
लामो समय कोही अस्पतालमा निर्देशक बनेका डा पोखरेलको समायोजन पछिको पदस्थापनमा जिम्मेवारी फेरिएको थियो । एघारौँ तहका उनी पछिल्लो समय कन्सलट्यान्टको भूमिकामा थिए । उनको स्थानमा विभागका तत्कालिन निमित्त महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीलाई लगिएको थियो ।
डा लोहनीको कोशीमा पदस्थापन गर्दा विभागमा १२ औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञ रहेका डा सुशीलनाथ प्याकुरेललाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । उनको गत २२ भदौमा उमेरहका कारण अवकाश भएको थियो । त्यसयता विभाग महानिर्देशक विहीन थियो ।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पोखरेललाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
प्रसूतिगृह अस्पतालको अक्सिजन प्लान विस्फोट हुँदा दुई घाइते
सुत्केरीको मृत्युपछि स्वास्थ्य चौकीमा तालाबन्दी, लापरवाहीको आरोप